Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Toerana tsara indrindra ho an'ireo tia Architecture Classic
Na mpanao mari-trano matihanina mila fitaomam-panahy ianao na manana fitiavana sy fientanam-po fotsiny amin'ny zavakanto izay niditra tamin'ny famoronana tranobe mahazatra, dia misy toerana maromaro manerana izao tontolo izao izay anananao fotsiny. hiaina sy hikaroka. Rehefa manao izany ianao dia ho azo antoka fa hivoky ny masonao amin'ny zavatra tsy hohadinoinao haingana.
Raha te hahita ny sasany amin'ireo anarana ambony indrindra eran'izao tontolo izao ho an'ireo tia maritrano mahazatra, dia aza hadino ny mamaky.
Ny tranokalan'ny UNESCO World Heritage of Úbeda, hita ao amin'ny faritr'i Jaén any Espaina, dia mendrika ny hitsidika ireo tia tranobe izay noforonina tamin'ny fomba Renaissance mahazatra. Ity fomba ity, izay fanao taloha tany Espaina, dia efa lany tamingana izao, saingy mameno ny arabe manomboka amin'ny faran'ny tanàna mankany amin'ny iray hafa, midika izany fa tsy ho lavitra azy mihitsy ianao.
Miasa toy ny vavahadin'i Andalusia, vavahady feno ranomasina misy hazo oliva tsy manam-paharoa, tsy latsak'izany, ity no toerana tonga lafatra hotsidihina raha te-hahita sy hiaina marina ny tantaran'i Espaina tsy voakitika sy tsy resy ianao. Tsy ratsy koa ny tanàna kambana ao aminy, Baeza, 10 kilometatra monja!
Angamba tsy misy toerana tsara kokoa ho an'ireo tia ny maritrano mahazatra ho an'ity tany ity noho ny St. Petersburg. Eto ianao dia ho tafaroboka tanteraka amin'ny hetsika Rococo, endrika izay nanjary nalaza tamin'ny taonjato faha-18 tany Frantsa saingy tsy ela dia tonga tany Rosia. Ny zavatra ho hitanao rehefa mibanjina ny masonao amin'ny tranoben'i Saint-Pétersbourg izay voaravaka amin'ny lamaody Rococo dia fiolahana matevina miaraka amin'ny loko hatsatra. Raha mpanao mari-trano matihanina ianao, dia azo antoka fa handao ity tanàna ity miaraka amin'ny fitaomam-panahy avy amin'Andriamanitra momba ny asa famolavolanao manaraka.
Any Nairobi, Kenya dia azo jerena ny iray amin'ireo trano 'firenena anglisy' tsara indrindra eran-tany. ny trano tsara tarehy Giraffe Manor misokatra ho an'izay ho avy hijery azy. Raha ny marina, misokatra ho an'ny olona rehetra ho avy sy hijanona ao! Rehefa mijanona eto ianao, dia tsy vitan'ny hoe hahita maritrano mitantara tantara an'arivony toy ny miverina amin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany tamin'ny taona 1930, fa hahita karazana bibidia isan-karazany mandeha manerana ny bozaka kanto ao an-trano. Araka ny efa noeritreretinao angamba dia ho hitanao ny ampahany tsara amin'ny zirafy, fa toy izany koa ny zirafy, mety hahita zirafy kely kokoa ianao, toy ny warthog sy vorombola.
Avy any Espaina ka hatrany Rosia ka hatrany Kenya, dia hita faritra sy trano manokana izay, rehefa hita, dia hipetraka ao an-tsain'ireo tena tia mpanao mari-trano mandritra ny taona maro ho avy. Manerana an'izao tontolo izao, any amin'ny kaontinanta rehetra, dia azo jerena ny maritrano izay nahazaka ny fitsapana ny fotoana ary lasa zavakanto ankehitriny. Inona àry no manakana anao tsy hivoaka any ary hahita izany rehetra izany?